Kunyorera kurambana nerubatsiro rwepamutemo? Tauya kuzokubatsira
Dhivhosi Mutemo » Kunyorera kurambana
KUSVIRA KUSVIRA KUTI DIVORISI?
> Kurambana mukubvunzana pamwe
> Unilateral kurambana
> Kurambana kubvumirana
> Kuronga kwevabereki
Nokukurumidza iwe newawakaroorana naye muchirambana, mibvunzo inokosha inomuka.
• Ndezvipi zvinhu zvinobatanidzwa mukurambana?
• Ndiani acharamba achigara pamba uye ndiani achasiya imba kana imba yacho ichatengeswa?
• Kuchengetwa kwemwana wako (ren) kwakarongwa sei?
Chii chinowiriranwa pamusoro pekubhadharwa kwemwana nemudiwa wake alimony?
• Uye zvibvumiranoi zvaunoita nezvekugoverwa kwezvinhu zvako?
Kurambana mukubvunzana pamwe
Kana iwe nemumwe wako muchigona kubvunzana uye kuwana zvibvumirano pamwe, isu tinokubatsira iwe nemumwe wako mukuita zvibvumirano zvakajeka panguva yemisangano kuhofisi yedu. Mushure mezvibvumirano zvakaitwa pamusoro pekurambana, isu tino simbisa kuti izvi zvinonyorwa nemazvo muchibvumirano chekurambana uye chirongwa chingangoita chekurera. Kamwe chibvumirano chekurambana kana chaitwa uye chakasainwa newe nemumwe wako, nyaya dzekurambana dzinogona kupedziswa nekukasira.
Chibvumirano chekurambana, zvinoreva chii? Chibvumirano chekurambana chibvumirano chakanyorwa pakati pako nemumwe wako. Sungano ine zvese zvibvumirano pamusoro, pakati pezvimwe zvinhu, mukwanyina alimony, kugoverwa kwemhedzisiro yemhuri, imba yemuchato, pension uye kugovera kwekuchengetedza. .
Mune vana vadiki here? Kana zvirizvo, zvinomanikidzwa kuti vaumbe chirongwa chekurera. Sungano yekurambana uye chirongwa chekurera vabereki zvese zviri chikamu chechikumbiro chekunyorera kurambana. Muchirongwa chekuva mubereki, zvibvumirano zvinoitwa pamusoro pemamiriro ehupenyu evana, kugovera mazororo, zvibvumirano zvine chekuita nekukura uye gadziriro dzekushanya. Isu tichakubatsira iwe kugadzira uye kunyora zvibvumirano. Isu tinoita zvakare mwana alimony kuverenga.
Izvi zvinotevera zvikamu zvinosungirwa:
• kupatsanurana kwese kwekutarisira nekusimudza mabasa;
• zvibvumirano zvine chekuita nenzira yamunodzidzisa mese pamusoro pevana;
• iyo huwandu uye nguva yemamony iwe iwe kana mumwe wako yauchabhadhara mukurerwa kwevana;
• zvibvumirano pamusoro pekuti ndiani anobhadhara zvakakosha mari, senge kumisasa pakupera kwevhiki kunhandare yemitambo.
Pamusoro pezvikamu zvekumanikidzira, kuchenjera kuita zvibvumirano nezvezvinyorwa izvo iwe nemumwe wako munoona zvakakosha. Iwe unogona kufunga nezvezvibvumirano zvinotevera:
• zvibvumirano pamusoro pekusarudzwa kwechikoro, kurapwa kwekurapa uye account yekuchengetedza;
• mitemo, semuenzaniso nezvenguva dzemubhedha uye kurangwa;
• kusangana nemhuri, sababamukuru, ambuya, vanababamunini pamwe nababamunini.
Kunyorera kurambana hakunei kune hukama hwakakura pahupenyu hwewako newawakaroorana naye, asiwo kune hwomwana wako (ren). Kurambana kunozoita kuti mumwe wako ave mumwe wako wawakarambana naye. Nekudaro, izvi hazvireve kuti wawakamboroora naye anozovawo mubereki wekare. Kushanda newawakaroorana naye panguva uye mushure mekurambana kunoda kushanda kwakawanda. Kunyange zvakadaro, vabereki vanoshanda pamwe vakakosha kwazvo pakugara zvakanaka kwevana. Hapana kuonana kana kushatisa kusangana pamwe nevabereki kunogona kuva nemhedzisiro yakaipa kumwana. Kunyangwe iwe uine vana vadiki kana vakuru vana, zvakakosha kuti zvido zvavo zvicherechedzwe munzira yekurambana..
Kuita kuti vana vako vatambure zvishoma sezvinobvira kubva pakurambana, zvakakosha kuita zvibvumirano zvakajeka. Tinokupa zano repamutemo uye kutaurirana pachinzvimbo chako.